Kubukeka njalo ngesonto ngilanda esinye isibuyekezo sesevisi seVista. Muva nje, iVista ibineService Pack ngosuku olufanayo lapho i-Apple ibinokubuyekezwa kwabo okungu-10.5.3 kwe-OS X Leopard. Kusukela ukuvuselelwa kuLeopard, bengilokhu nginezingqinamba eziningi ngisebenzisa isiphequluli… noma ngabe iSafari noma iFirefox.
Ngakho-ke benze ukuthuthuka kepha bakudebeselela ukubuyekeza ukufakwa kwabo kwe-Safari ukuze bakuvumele? O sithandwa se-Apple, mhlawumbe kufanele uhlale umncane. Okuxakayo ukuthi ngisebenzisa iFirefox ngokufana kule MacBookPro manje ukuntweza ngokushesha inetha.